FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SHICHI - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika ShiChi
Alika mifangaro Chihuahua / Shih Tzu mifangaro
Ity i Maximus, hazo fijaliana Shih Tzu / Chihuahua 4 taona (ShiChi) tsara tarehy, mahafatifaty.
Ny ShiChi dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Shih Tzu . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Registra ny famolavolana endrika = Shichi
Mpanoratra International Canine Registry®= Shi Chi
Ellie Mae the Shi-Chi puppy amin'ny faha-4 volana— 'Ity no malalako Ellie Mae McKinney. Teraka sy notezaina tao an-tranonay i Shi-Chi, Daisey McKinney iray hafa. Shih Tzu feno rà ny rainy avy amin'ny namantsika iray. Samy blondy ny ray aman-dreny, izay mampisavoritaka anay amin'ny fomba fotsy sy volom-borona. Ellie no malalantsika ato an-trano izay mety ho saro-kenatra tokoa indraindray, saingy feno fitiavana tanteraka rehefa zatra anao. '
Lulu Bluebell the Shi Chi toy ny alika kely amin'ny 5 volana— 'Lulu dia zazavavy kely mahafinaritra manana toetra tsara indrindra ary tia ny rehetra. Ny reniny dia Shih Tzu ary ny dadany dia Chihuahua lava volo. Tiany ny handeha hiaraka amiko ary hijanona hanakorontana azy ny rehetra satria mahavariana sy mahafinaritra izy. '
Lulu Bluebell the Shi Chi toy ny alika kely amin'ny 5 volana eo am-baravarankely
'Bonny no alika voalohany, ka dia alika vaovao izahay, ary toy izany koa ny saka Laramie. Ny ray aman-drenin'i Bonny dia natolotra tamin'ny kilao taorian'ny fitondrana vohoka tsy voaomana. Nandeha fiara 11 adiny izahay mba hahitany azy fotsiny ary nifankatia avy hatrany. Bonny dia mpianatra afovoany misy 2 mirahalahy, Max sy Jack. Ny reniny dia a Chihuahua lava volo ary dada a Shih Tzu . Nanomboka nampiofana an'i Bonny izahay tamin'ny alàlan'ny toro-hevitra avy amin'ny DVD Cesar Millan ary misoratra anarana amin'ireo fotoam-pivoriana an-tserasera izay manampy anay isaky ny mila torohevitra. Misaotra ny Dog Breed Info Center dia hitako ny mety ho endrik'i Bonny talohan'ny nananganana azy. Ny ray aman-drenin'i Bonny sy ny iray tam-po aminy dia naterina indray noho ny Pet Rescue Australia. '
ShiChi zanak'alika Darla sy Butch amin'ny faha-4 volana— 'Zareo dia manana maso manga sy toetra lehibe. Darla dia cutie mahafinaritra sy azo sarahina ary i Butch (ilay fotsy) lehibe kokoa ary tia mitolona sy milalao haza amin'ny kilalao. '
ShiChi zanak'alika Darla sy Butch amin'ny 6 volana
fifangaroana volamena sy fifangaroana bulldog
Missy, ShiChi iray taona - ny reniny dia tan Chihuahua kely, ary ny rainy dia Shih Tzu kely. Missy dia dimy kilao ary toa be volo ratsy foana!
'Ity i Mitzy. Shichi izy ary izy no saribakoly tsara indrindra. Tsy mivily izy. Milamina sy marani-tsaina izy ary tena mahay tsara. '
Sami the ShiChi amin'ny faha-3 taonany— 'Izy no alika mpitsikitsiky indrindra nananako ary nomeko an'io Chihuahua ao aminy io. Manana an'i Shih-Tzus aho taloha ary tsy toy izany mihitsy ry zareo !!! '
Mandresy ny alika ShiChi amin'ny 8 herinandro sy 2 pounds— 'Feno heriny izy, tiany ny saina ary milalao.'
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny ShiChi
Sary ShiChi 1
Sary ShiChi 2
Basset nanenjika Cocker spaniel afangaro amidy
alika miteraka mihoatra ny 100 pounds
manga orona pitbull alika sary
fifangaroan'ny alika omby amerikana
poodle sy fifangaroan'ny dane mahafinaritra